Fanesoana dokambarotra an-kalamanjana 30 maimaim-poana sy fanararaotana mupi | Famoronana an-tserasera
Mupi Mockup ary fanesoana dokam-barotra any ivelany
Manuel Ramirez | | dia midika hoe
Rehefa manatanteraka tetik'asa famolavolana (na sary dokambarotra na volavolan-tranonkala) fampisehoana sy fisehoana no antony iray lehibe manandanja ny momba azy. Soa ihany, manana loharanom-pahalalana marobe isika anio izay manamora ny fanolorantsika vokatra, hevitra na hevitra iray.
Ireo loharano ireo dia antsoina hoe Mockups ary ny zavatra mahazatra dia misy amin'ny endrika psd izy ireo ary vonona ny hampiasain'ny zavatra marani-tsaina. Ireto ambany ireto dia azonao atao ny mahita ny lisitr'ireo fanesoana dokambarotra 18 maimaimpoana amin'ny endrika psd.
1 Famerenana fijanonana bus maimaim-poana
2 PSD hoarding mockup maimaimpoana maimaimpoana
3 Mackup PSD an'ny Banner Streamer maimaim-poana
4 PSD mockup marika marika maimaim-poana
5 PSD mockup marika marika London bus maimaim-poana
6 Fanesoana PSD maimaim-poana any ivelany
7 Fampandrenesana maimaim-poana ny bus MockUp PSD
8 Van Mockup Psd maimaim-poana
9 Fampandehanana sary maimaimpoana ho an'ny fialofana amin'ny bus
10 PSD maimaim-poana Billboard Mockup maimaim-poana
11 Modely PSD Mockup Poster ivelany
12 Billboard kely ihomehezana PSD
13 Afisy dokambarotra anaty trano
14 Poster momba ny doka anaty trano 02
15 Billboard fijanonana bus
16 Fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka 02
17 Afisy afovoan-tanàna 10
18 Takelaka takela-by
19 Doka ho an'ny varavarankelin'ny fivarotana
20 Famantarana rindrina mihantona
21 Famantarana ny rindrina mihantona 05
22 Famantarana ny rindrina mihantona 03
23 Famantarana ny rindrina mihantona 02
24 Afisy pub 5 tsara be
25 Famantarana ny rindrina mihantona 010
28 Vintage Logos The Alpes
29 Ny Bar Bar
Famerenana fijanonana bus maimaim-poana
Doka ivelany mametraha eritreritra manintona ny saina miaraka amin'ilay vorona manidina.
PSD hoarding mockup maimaimpoana maimaimpoana
Toy izany koa, fa miaraka habe iray ho an'ny karazana doka hafa araka ny asehon'ny sary tsara.
Mackup PSD an'ny Banner Streamer maimaim-poana
Miaraka amina endritsoratra manokana izay marika famantarana ny mety ho hetsika.
PSD mockup marika marika maimaim-poana
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny tontolo iainana sy ny loko mifandraika indrindra amin'ity fahatsapana ity, ity fanesoana tonga lafatra ity noho ny antony samihafa.
PSD mockup marika marika London bus maimaim-poana
Ho an'ny refy lehibe ity fanesoana tonga lafatra ho an'ny bus.
Fanesoana PSD maimaim-poana any ivelany
Tsotra miaraka amina endritsoratra manamarika ny fanapaha-kevitra sy ny sasany tsipika oblique voafaritra tsara.
Fampandrenesana maimaim-poana ny bus MockUp PSD
tanteraka ho an'ny mpiantoka izay te-hanisy marika ny hevitra fitokisana ao amin'ny orinasa.
Van Mockup Psd maimaim-poana
Fanesoana iray hafa ho an'ny a fiara misy motera mena sy typeface mivantana.
Fampandehanana sary maimaimpoana ho an'ny fialofana amin'ny bus
Ho an'ny iray fijanonan'ny bus tsy misy fitadiavam-bola ary izany dia mandeha mahitsy amin'ny teboka.
PSD maimaim-poana Billboard Mockup maimaim-poana
Un famolavolana vita amin'ny rindrina.
Modely PSD Mockup Poster ivelany
Motif volomboasary hoho tsipika diagonal izay mamorona sary somary abstract.
Billboard kely ihomehezana PSD
Amin'ny hafa habe midadasika kokoa ary miaraka amina motera iray ihany amin'ny voasary.
Afisy dokambarotra anaty trano
Ho an'ny afisy mahazatra izay afaka jerentsika amin'ny toeram-pivarotana lehibe miaraka amina endritsoratra tena manintona.
Poster momba ny doka anaty trano 02
Mihoatra ny sary afisy amin'ny hamburger miaraka amina endrika manokana.
Billboard fijanonana bus
Si ny antony dia akanjo sy lamaody, ity fanesoana fijanonana bus ity.
Fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka 02
iray hafa kinova taloha.
Afisy afovoan-tanàna 10
Afisy afovoan-tanàna manana habe samihafa miaraka amin'ny motif amin'ny maitso fluorescent.
Un fanesoana tonga lafatra amin'ny fampirantiana zavakanto.
Doka ho an'ny varavarankelin'ny fivarotana
Raha hanokatra a magazay manokana miaraka amina fikitika mahafinaritra, ity ho anao.
Famantarana rindrina mihantona
iray hafa afisy tsara endrika.
Famantarana ny rindrina mihantona 05
Tsipika mitsangana ho an'ny sary famantarana afaka tafiditra ao amin'ny fivarotana rehetra izay manomboka amin'ny litera "M".
Famantarana ny rindrina mihantona 03
Ho an'ny mpivaro-mofo na karazana rehetra vokatra izay vita tanana.
Famantarana ny rindrina mihantona 02
Ny iray hafa manana tanjona mitovy amin'ilay teo aloha, fa mifandraika kokoa amin'ny sakafo maraina sy tsakitsaky.
Afisy pub 5 tsara be
For a pub of chemicals ary misy ny "that", mihoatra ny tonga lafatra. Ny iray amin'ireo dimy dia vita asa mahay.
Famantarana ny rindrina mihantona 010
Labiera sy zava-pisotro tsara ho an'ny afisy somary hipster sy vintage.
Una Ny burger maoderina dia afaka manao perla famantarana ivelany ity.
For a hetsika izay famolavolana no axis afovoany, na izany nandoko.
Vintage Logos The Alpes
Ho an'ny karazana rehetra fananganana izay misy ifandraisany amin'ny tendrombohitra.
Ny Bar Bar
famolavolana natokana ho an'ny sambo taratasy.
Ity mupi mockup avo lenta avo lenta amin'ny endrika PSD ity dia mamela anao dia hahafahanao mampifanaraka ny sosona sy ny zavatra marani-tsaina araka ny itiavanao azy amin'ny famolavolana azy. Manokana ho an'ny mupis sy ny canopies izay mety eny an-dalambe na amin'ny toeram-pivarotana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Mupi Mockup ary fanesoana dokam-barotra any ivelany
Fampianarana fototra hianaranao ny fomba fampiasana GIMP